‘मनीप्लान्ट’ वा लहराहरु घरमा लगाउँदैहुनुहुन्छ ? होशियार ! कतै यस्ता गल्ती त गर्दैहुनुहुन्न ?
शनिबार, १९ माघ, २०७५
हामी प्राय जसो हामी घर सजाउनको लागी घरको भित्तामा मनि प्लान्ट वा अन्य लहरे फुल जस्ता विरुवाहरु राख्ने गर्दछौ । तर वास्तु शास्त्र अनुसार यसो गर्दा मानिसहरुका शत्रुहरु बढ्ने गर्दछन् ।
त्यसैले यदी तपाइँ पनि यस्तै फूलहरु वा लहराहरुले आफ्नो घर सिङ्गार्दै हुनुहुन्छ भने होशियार, तपाईले ठूलो गल्ति गर्दै हुनुहुन्छ ।
वास्तु शास्त्रका अनुसार घरको भित्तामा यस्ता लहराहरू भएका बोट विरुवा लगाउनु अशुभ मानिन्छ । यसो गर्दा तपाईका शत्रुहरु बलवान हुन्छन् र तपाईलाई नोक्सान पुर्याउन सक्छन् । यस्ता लहराहरू घरभित्र मात्र नभई घरको ढोकामा लगाउनु समेत वास्तु शास्त्रका अनुसार अशुभ मानिन्छन् ।
हाम्रो हिन्दु धर्म वा पुराण अनुसार, मत्स्य पुराणमा वास्तु शास्त्रको प्रभाब उल्लेख गरिएको छ । यस पुराण अनुसार लहरा भएका बोट९विरुवाहरुबाट शुक्र ग्रहमा प्रभ पर्ने गर्दछ ।
त्यसैले घरको दक्षिण भाग वा खाली भागमा मात्र यस्ता विरुवाहरु लगाउनु पर्दछ । त्यसैले रुखको सहाराले माथि जाने खालका यस्ता विरुवाहरु लगाउदा सधै ध्यान दिनु अनिवार्य हुन्छ । यस्ता विरुवाहरुलाई घर भित्र पस्न दिनु हुदैन ।